လက်ကား Masteron ထိုးဆေး anabolic steroids Drostanolone Enanthate ကြွက်သားမြှင့်တင်ရေးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ |Taigui
Masteron Injectable anabolic steroids Drostanolone Enanthate ကြွက်သားများ မြှင့်တင်ခြင်း။
နာမည်အရင်း- Masteron၊ Drostanolone ;Drolban
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အဖြူရောင် crystalloid အမှုန့်။
သိုလှောင်မှု- အရိပ်ထိုးခြင်း၊ ကန့်သတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
အသုံးပြုမှု- ဆေးဝါးပစ္စည်း၊ Steroid ဟော်မုန်း၊ Anabolic။အမျိုးသားဟော်မုန်းနှင့် anabolic ဟော်မုန်းအဖြစ်။Drostanolone ကို ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် "ဖြတ်တောက်ခြင်း" တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Half-Life-Drostanolone Enanthate သည် 7-10 ရက်အတွင်း တစ်ဝက်သက်တမ်းရှိသည်။
50 ဂရမ် Drostanolone enanthate (37.5 ml)
ဆီ 157.5 ml Tren E 125mg / Fat E 125mg / Test E 125mg
ဆီ (3.6ml) Tren E 250mg / Ointment E 250mg
Masteron E ၏ ရှင်းလင်းချက်
1. Masteron သည် စတီးရွိုက်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
2. ၎င်းအား ထုထည်နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း အေးဂျင့်အဖြစ် ကာယဗလသမားများက အသုံးပြုသည်။
3. ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကွဲပြားမှုများစွာအတွက် တာဝန်ရှိသော ဟော်မုန်းဖြစ်သည်။
4. Masteron သည် အစွမ်းထက်သော anabolic/androgenic steroid ဖြစ်သည်။
5. ကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
6. ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကြွက်သားကြီးထွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
Masteron E Dosage ညွှန်ကြားချက်
ထိရောက်သောဆေးပမာဏ (အမျိုးသားများ): 400-600mgs/ပတ်
ထိရောက်သောဆေးပမာဏ (အမျိုးသမီးများ): 100mgs/ပတ်
Beginner Masteron Cycle Example (စုစုပေါင်း လည်ပတ်ချိန် 12 ပတ်)
အပတ် ၁ - ၁၂
- Masteron (Drostanolone Enanthate) 400mg/ပတ်
အလယ်အလတ် Masteron သံသရာ နမူနာ (စုစုပေါင်း လည်ပတ်ချိန် 10 ပတ်)
အပတ် ၁ - ၁၀
- Testosterone Propionate 100mg/week (25mg တနေ့ခြား)၊
- Masteron (Drostanolone Propionate) 400mg/week (100mg တနေ့ခြား)၊
အပတ် ၁ - ၈
- Anavar 50 - 70mg/day
အဆင့်မြင့် Masteron သံသရာနမူနာ (စုစုပေါင်း လည်ပတ်ချိန် ၁၀ ပတ်)
Enanthate နှင့် Propionate
ကွဲပြားခြားနားသော esters များကိုသယ်ဆောင်ပေးသည့် anabolic steroids ထိုးဆေးအများအပြားရှိပါသည်- testosterone၊ trenbolone နှင့် nandrolone တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးဥပမာများဖြစ်သည်။enanthate (enan) ကဲ့သို့သော ပိုရှည်သော ester များကို များသောအားဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် (၁) ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် (၂) ကြိမ် မကြာခဏ ထိုးနိုင်သည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ propionate (prop) ကဲ့သို့သော ပိုတိုအက်စတာများကို နေ့တိုင်း သို့မဟုတ် တစ်ရက်ခြား (ED နှင့် EOD) ထိုးလေ့ရှိသည်။တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ထိုးချင်သူတွေအတွက်တော့ enanthate ဗားရှင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
masteron propionate ကိုသုံးသောအသုံးပြုသူများသည် trenbolone acetate၊ testosterone propionate သို့မဟုတ် NPP (nandrolone phenylpropionate) ကဲ့သို့သော ပိုတိုသော ester နှင့် တွဲထားတတ်သည်။Stacking သည် esters တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တသမတ်တည်းရှိနေစေသည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ masteron ၏ enanthate ဗားရှင်းနှင့် ပါ၀င်သူများသည် Testosterone enanthate သို့မဟုတ် cypionate၊ trenbolone enanthate သို့မဟုတ် deca durabolin (nandrolone decanoate) ကို စုစည်းထားကြသည်။
Propionate ester သည် enanthate ester ထက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် စနစ်မှ ပိုမြန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်မည်ဖြစ်သည်။Steroid ester များသည် သင့်စနစ်မှ လုံးလုံးလျားလျား မထွက်မချင်း ခန္ဓာကိုယ်၏ HPTA သည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးသည်။
အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်မှာ သင်သည် စက်ဝန်း 8 ပတ် သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းပါက Masteron Propionate ကို stack လုပ်ပါ။သို့သော်၊ သင်သည် စက်ဝန်းပိုရှည်သွားပါက Masteron Enanthate ကိုအသုံးပြုရန် အကြံဉာဏ်ကောင်းဖြစ်သည်။အဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့အတွက် ပိုကောင်းသည်ဟု ကျိန်ဆိုကြပြီး အချို့ကမူ ထူးခြားမှုမရှိဟု ဆိုကြသည်။
ယခင်- Boldenone Undecylenate အရည် ထိုးဆေးသုံးနိုင်သော anabolic steroids Equipoise / Ultragan CAS 13103-34-9
နောက်တစ်ခု: Methenolone Enanthate Primobolan Depot ကြံ့ခိုင်မှု ထိုးဆေး anabolic Steroid ဟော်မုန်းများ